१४ कार्तिक २०७७ | October 30, 2020
यस्ता तस्विर सार्वजनिक गदै तिर्सनाले गरिन् नाकाबन्दीको विरोध (फोटोफिचर)
२७ मङ्सिर २०७२
भारतको नाकाबन्दीले जनताको जनजीवन अस्तव्यस्त बनेको भन्दै मोडल तिर्सना बुढाथोकीले भारतको विरोध गदै तस्विरहरु सार्वजनिक गरेकी छिन् । केहिसमय अघि उनिसँग लिएको अन्तरवार्ता पढ्न तलको लिंकमा जानुहोस् नाकाबन्दीले पागल भए, मोडलिङबाटै विरोध जनाउँछुः तिर्सना बुढाथोकी विस्तृत समाचार »
अर्नभ नेपाली अभिनय जगतमा प्रवेश
२७, मंसिर काठमाडौँ । ‘तिमी त राम्री’ वोलको गीतमा अभिनय गरेर दाङ्ग तुलसीपुरका अर्नभ वस्नेत , नेपाली अभिनय जगतमा प्रवेश गरेका छन् । सानै देखि अभिनयमा रुचि राख्ने वस्नेत लोकप्रिय गायक विजय रुम्वाको स्वर रहेको यस गीतबाट निकै आशावादी पनि छन् ‘ मैले सोचे अनुसार काम गर्न नसकेपनि पहिलो प्रयास भएकाले निकै मेहेनत गरेको छुँ ’ मोडलिङ्गलाई रहर भन्दा पनि व्यवसायका रुपमा अगाडी वढाउनुपर्ने सोच…विस्तृत समाचार »
मायांमा धोका दिएपछि ज्योति मगरलाई गोली (भिडियो सहित)
२५ मङ्सिर २०७२
काठमाडौं। गायिका तथा मोडल ज्योति मगरको फेरि चर्चा सुरु भएको छ । उत्तेजक प्रस्तुती दिएर पटक पटक विवादमा आउने मगरले फेरी गोली मायांमा धोका दिने केटालाई गोली ठोक्नु पर्ने बोलको गीतमा मोडेलीङ गरेकी छन् । यसमा पनि उनले छोटा छोटा पहिरन लगाएर निकै रोमान्स गरेकी छन् हेर्नुस भिडियो ।विस्तृत समाचार »
भाग् सानी भाग् अष्ट्रेलियाबाट
२४ मङ्सिर २०७२
काठमाडौं । विदेशमा नेपाली फिल्महरुको प्रिमियर गर्ने चलनलाई ‘भाग सानी भाग’ ले पनि निरन्तरता दिने भएको छ । नेपालमा चैत ५ गते प्रर्दशन गरिने यो फिल्मले अष्ट्रेलियाको विभिन्न ९ शहरमा प्रर्दशन घोषणा गरेको छ । फिल्मको पहिलो प्रदर्शन डार्बिन शहरमा आगामी जनवरी २९ मा गरिने निर्माता बिष्णु चापागाईंले बताएका छन् । डार्बिन शहरपछि यो फिल्म अन्य शहरहरुमा पनि प्रदर्शन गरिने निर्माता चापागाईंको योजना छ ।…विस्तृत समाचार »
नाकाबन्दीले पागल भए, मोडलिङबाटै विरोध जनाउँछुः तिर्सना बुढाथोकी
२२ मङ्सिर २०७२
भारतको नाकाबन्दीले जनताको जनजीवन अस्तव्यस्त बनेको छ । उद्योग, कलकारखाना देखि सबै क्षेत्रमा यसको प्रभाव छ । नाकाबन्दीले कलाकारलाई समेत निकै अस्तव्यस्त बनाएको छ । नाकाबन्दी र यसको प्रभावका विषयमा मोडल तिर्सना बुढाथोकीसँग न्यूजसेवा डट कमले गरेको कुराकानी । नाकाबन्दीको प्रभाव कस्तो छ ? भनि साध्य नै छैन । नाकाबन्दीले म त पागल भइसकेकी छु । तपाईको घरमा ग्यास छ कि छैन ? ग्यास कहाँ…विस्तृत समाचार »
यस कारण बन्द भए नेपाल टेलिभिजनका सबै कमेडी सिरियलहरु
२२ मंसिर, काठमाडौं । नेपाल टेलिभिजनको प्रमुख आकर्षण बन्दै आएका सबै कमेडी सिरियलहरु बन्द भएका छन् । राष्ट्रिय टेलिभिजन च्यानल नेपाल टेलिभिजनका लागि कमेडी सिरियल उपलब्ध गराउँदै आएको मिडिया हबले बक्यौदा रकम भुक्तानी नगरेपछि टेलिभिजनले सबै कमेडी सिरियल बन्द गरिदिएको हो । मिडिया हबले तीतो सत्य, जिरे खुर्सानी, मेरी बास्सै, भद्रगोल र हाका हाक्की प्रसारण गरेबापतको ठूलो रकम नतिरेपछि नेपाल टेलिभिजनले यी सिरियलको प्रसारण बन्द गरेको…विस्तृत समाचार »
हामी नेपाली के को स्वाभिमानी
२१ मङ्सिर २०७२
काठमाडौं । नेपालका चर्चित लोक दोहोरी गायक पशुपति शर्माले हामी नेपाली हैनौ स्वाभिमानी भन्ने बोलको गीत नेपाली बजारमा ल्याएका छन् । अर्को देशसंगमात्र भर पर्दा नेपालले भारतीय नाकाबन्दी पछि भोग्नुपरेको संकटको अवश्थालाई व्यंग्य गर्दै उनले यो गीत निकालेका छन् । उनले नेपालीले अहिले सम्म केही गर्न नसकेको कारण भारतले नाकाबन्दी लगाउँदा नेपालीले दुख पाउनु परेको गीतमा भनेका छन् । भिडियो हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस आफ्ना…विस्तृत समाचार »
किन हालियो नायिका रेखा थापालाई ठगीे मुद्धा
२० मङ्सिर २०७२
काठमाडौं । चर्चित नायिका रेखा थापा अहिले ठगी गरेको भन्दै चर्चामा छिन् । एक कार्यक्रमका लागि रेखाले एक लाख लिएर कार्यक्रममा नगएको भन्दै आयोजनकले ठगी गरेको मुद्धा हालेपछि रेखा तानाबमा मात्रै छैनन् उनले नायिका बन्न गरेको ठुलो संघर्षलाई नै कमजोर बनाइदिएको छ । कार्यक्रममा सहभागी हुन १ लाख लिएर पनि नगएको भन्दै आयोजकले खोटाङ प्रहरीमा ठगी मुद्दा हालेको कुराले जताततै तरंग फैलायो । थुप्रै नायिकाहरु…विस्तृत समाचार »
उद्दबले भने “भैगो बदनाम नगर”
१९ मङ्सिर २०७२
१९, मंसिर काठमाडौँ । २०५७ सालबाट संगीत क्षेत्रमा लागेका काठ क्षेत्रका बहुचर्चित लोक गायक उद्दब कार्कीको नया गीति एल्बम भैगो अब बदनाम नगर बजारमा आएको छ । एकताका चर्चित गित सुन कोशी सलल अनि खानि खोला बाचेमा भेट होला ,रुमालै छ चिनो लगायत करिब २०० भन्दा बढी गीतमा स्वर दिएका गायक कार्की पछिल्लो समय चर्चा बटुल्दै छन । नुवाकोट जिल्लाको महाकाली गा बि स वडा…विस्तृत समाचार »
कलाकर्मीहरुको विजोग, भाडा तिर्न नसक्दा घरबेटीले ठोके ताला
१८ मङ्सिर २०७२
नेपाल संगीत उद्योग संघको कार्यालयमा घरबेटीले ताला लगाइदिएका छन् । अनामनगर स्थित कार्यालयमा बिहिबार दिउँसो घरबेटीले सुचना टाँसेर बाकि रहेको भाडा तिरेर मात्रै अफिस खोल्न भनेका छन् । अस्त व्यस्त संस्थाको छवी बनाएको संघले झण्डै एकवर्षको भाडा तिरेको छैन । बुटवल निवासी घरधनी रमेश घिमिरेले अफिसमा सुचना टाँसिएको बताए । संघले घरभाडा मात्रै १ लाख १३ हजार ४ सय ५ रुँपैया तिर्न बाँकि रहेको घरधनी…विस्तृत समाचार »
‹ First Newer 94 95 96 97 98 Older Last ›
२१ कात्तिकदेखि कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक
१३ कात्तिक, काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक यही २१ कात्तिकदेखि बस्ने भएको छ । बैठक पार्टी कार्यालय सानेपामा बस्ने कांग्रेसका मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए । यस बैठकमा कांग्रेसका कार्यसमिति पदाधिकारी, केन्द्रीय समितिका सदस्यहरू तथा आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्यहरू उपस्थित हुनेछन् ।
नेकपा केन्द्रीय समिति बैठक एक महिना सर्‍यो
१२ कात्तिक, काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को केन्द्रीय समितिको बैठक एक महिनाका पर सरेको छ। नेकपाको केन्द्रीय कार्यालयले बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै बैठक मंसिर १५ गतेका लागि सारिएको जनाएको छ।
प्रधानमन्त्रीले ‘रअ’ प्रमुख गोयलसँग समकक्षीझैं वार्ता गरेको नेकपा प्रवक्ता श्रेष्ठको आरोप
९ कात्तिक, काठमाडौं । सत्तारुढ नेकपाका प्रवक्ता तथा पूर्व परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कुटनीतिक मर्यादा विपरित भारतीय गुप्तचर संस्था रअका प्रमुख सामन्तकुमार गोयलसँग गरेको भेटले राष्ट्रिय स्वाभिमान, सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय हितलाई कमजोर पार्ने बताएका छन्।
मास्क प्रयोग गर्न आग्रह गर्दा यी दिदीबहिनीले सुरक्षागार्डमाथि २७ पटक प्रहार गरे चक्कु
१२ कात्तिक, काठमाडौं । अमेरिकामा मास्क र स्यानिटाइजर प्रयोग गर्न अनुरोध गर्दा अमेरिकामा एक दिदीबहिनीले सुरक्षागार्डमाथि २७ पटक चक्कु प्रहार गरेका छन्। गत आइतबार इलिनोइस्थित होमन स्क्वायरको एक स्टोरमा मास्क नलगाई पस्न खोज्दा २१ वर्षकी निथर जेसिका हिल र उनका १८ वर्षकी बहिनी जेलालाई सुरक्षागार्डले मास्क लगाउन र स्यानिटाइजर प्रयोग गर्न आग्रह गरेका थिए।
कोरोना महामारीबीच बिहारमा मतदान सुरु
१२ कात्तिक, काठमाडौं । कोरोना महामारीबीच भारतको बिहारमा विधान सभा चुनावअन्तर्गत बुधबार मतदान सुरु भएको छ। भारतीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार बिहार विधान सभाका २४३ सिटका लागि पहिलो चरणको मतदान सुरु भएको हो। पहिलो चरणमा बिहारका १६ जिल्लाको कूल ७१ सिटमा मतदान भइरहेको बीबीसी हिन्दीले जनाएको छ।
उत्तर सिरियामा रुसको हवाई हमला, टर्की समर्थक ५० भन्दा बढी लडाकुको मृत्यु
११ कात्तिक, काठमाडौं । उत्तर सिरियाको इडलिब प्रान्तमा रुसले गरेको हवाई हमलामा ५० भन्दा बढी टर्की समर्थक लडाकुको मृत्यु भएको छ। बीबीसीका अनुसार घटनामा कैयौं लडाकु घाइते भएका छन्। हवाई हमलापछि त्यस क्षेत्रमा हिंसा बढेको छ।फेयलक अल साम नामक संगठनको प्रशिक्षण आधारलाई निशाना बनाएर आक्रमण गरिएको थियो।